Tsinjo : Fanaraha-maso Itaosy Andranonahoatra
Ankoatry ny famatsiana dia tsy miato ny fanaraha-maso akaiky ataon’ny MICA amin’ireo vidin’entana. Amin’ireo vidim-bary nahitana fiakarany dia nandraisan’ny mpanara-mason’ny varotra eto amin’ny minisitera fepetra. Noho izany nampidinina ny vidin’ny … Read More
Tsinjo : Fanaraha-maso Ambanidia, Ambohipo
Rehefa nahavoaray antso avy amin’ny mpanjifa ny mpanara-maso eto anivon’ny MICA dia nidina nanao ny fitsirihana teny amin’ny tsenan’Ambanidia sy Ambohipo. Nijery ny vidim-bary gasy sy Makalioka no anton’ity fitsirihana … Read More
Tsinjo : Ambohipo
Tanteraka soa aman-tsara ny fitaterana ny vary tao amin’ny boriborin-tany faharoa tao Ambohipo, ny zoma 3 aprily. Raha ampatsiahivina dia hetsika karakarain’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA) … Read More
Famokarana aro vava 150.000 isan’andro
Orinasa afaka haba 5 no mifandrimbona hamokatra aro vava hovidian’ny fitondram-panjakana ka hozaraina amin’ireo olona tena mila izany amin’izao vanim-potoan’ny fihibohana izao. Manaraka ny fenitra (protocole) Grenoble ireto aro vava … Read More
Tsinjo : Ivato
Mitohy ny famatsiana ireo tsena madinika sy mpanjinjara eny amin’ny faritra Ivato. Fiaraha-miasa feno amin’ny ben’ny tanàna ao an-toerana izany ary vahaolana entina ho an’ireo mpanjinjara manara-drafitra amin’ny fitaterana.
Tsinjo : Toamasina, Atsinanana
Nanao fanaraha-maso tao Bazary kely, Tanambao 2, Ambolimadinika sy Mangarano ny foiben-draharahan’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana ao amin’ny faritra Atsinanana. Tsikaritra arak’izany fa tsy misy ny fiovana mihaom-papana … Read More